Puntland oo shuruudo adag ku xirtay shirka Dhuusamareeb 3 | 18 May News
Maamul goboleedka Puntland ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka fashilinta natiijooyinkii ka soo baxay shirarkii Dhuusamareeb 1 iyo 2, waxaana ay ugu baaqday Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo inuu soo magacaabo ra’iisal wasaare qeyb ka noqda fulinta heshiisyada laga gaaro qabsoomidda doorashada dalka ee 2020/2021.
Madaxweyne Farmaajo, madaxda saddex maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb si ay uga qeybgalaan shirka 3-aad ee looga arinsanayo doorashada soo socota.
“Madaxweynuhu waxa uu si farsamo ah u daahiyay magacaabista ra’iisal wasaaraha cusub si uusan u hirgelin is-afgaradkii Dhuusamareeb 2 iyo qabsoomidda Dhuusamareeb 3,” ayaa lagu sheegay war saxaafadeed xalay ay soo saartay madaxtooyada Garowe.
Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ka maqan madasha Dhuusamareeb. Madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni ayaa shalay ka soo laabtay safar uu ugu maqnaa dalka Jabuuti, halka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) uu ku sugan yahay Nairobi oo sida dad ku dhaw ay BBC-da u sheegeen uu ku galay qalliin fudud.
Golaha shacabka ayaa 25-kii July kalsoonida kala laabtay Xasan Cali Kheyre iyo xukuumadda uu hogaaminayay. Tan iyo markaasina waxaa si kumeelgaar ah xilkaasi u hayay ra’iisal wasaare kuxigeenka, Mahdi Maxamed Guuleed.
“Doodda Puntland ee ah in madaxweynaha uu ra’iisal wasaare soo magacaabo waa mid gar ah, maadaama xukuumad uu baarlamaanka ansixiyay ay tahay midda looga fadhiyo inay fuliso heshiisyada siyaasadeed ee dalka,” ayuu yiri garyaqaan Sakariye Yuusuf oo ka tirsan hay’adda xasaradaha dunnida ee ICG.
“Arinta in beesha caalamka ay qeyb ka noqoto shirka Dhuusamareeb waxa ay u muuqataa mid ay Puntland cadaadis ku saarayso Madaxweynaha.” Ayuu hadalkiisa raaciyay garyaqaan Sakariya.
Wasiirka warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Maxamed Falagle, ayaa BBC-da u sheegay in madaxda Puntland iyo Jubbaland la filayo inay gaaraan Dhuusamareeb ayna shirka ka qeybgalaan.
Waxa uu intaa raaciyay in aanay jirin wax cudur-daar ah oo dhankooda ka soo gaaray, oo ay ku sheegayaan inay ka baaqdeen shirka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Sabtidii golaha shacabka u jeediyay khudbad nuxurkeedu ahaa in heshiis kasta oo lagu gaaro Dhuusamareeb uu ku soo celin doono golahaasi.
Arintaasi ayaa waxaa ka qaadacay gudoomiyaha aqalka sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, oo madaxweynaha ku tilmaamay mid ku xadgudbay darstuurka dalka.
Shirka Dhuusamareeb 3 ayaa la filayaa inuu jiheeyo hannaanka doorashada dalka isla markaana lagu go’aamiyo nooca iyo xilliga ay dhacayso.
Golaha Deegaanka Berbera Oo La Ansixiyay Iyo Wasiiro Katirsan Xukumada Goob Joog Ahaa[Muuqaal]
Xildhibaan Jamac Canabodhe Oo Deegaanka Dhoomo Ka Dhagax-dhigay Xarun Caafimaad[Muuqaal]
Tababar Loo Furay Haweenka Katirsan Ciidanka Asluubta JSL+Ujeedada Tababarkaasi[Muuqaal]